I-china abakhiqizi be-PAM-Cationic Polyacrylamide nabaphakeli | Amanzi ahlanzekile
I-PAM-Cationic Polyacrylamide isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izinhlobo ezahlukahlukene zamabhizinisi ezimboni kanye nokwelashwa kwendle.
Lo mkhiqizo uyikhemikhali enobungani bemvelo .Ayincibiliki kumakhemikhali awuketshezi amaningi, ngomsebenzi omuhle wokubhebhetheka, futhi inganciphisa ukumelana kokungqubuzana phakathi kuketshezi. Inezinhlobo ezimbili ezihlukene, i-powder ne-emulsion.
1. It is ikakhulukazi esetshenziselwa sludge dewatering futhi wehlise izinga lokuqukethwe amanzi sludge.
2. Ingasetshenziswa ekwelapheni amanzi angcolile ezimboni kanye namanzi okuthuthwa kwendle.
3. Ingasetshenziselwa ukwenziwa kwephepha ukwenza ngcono iphepha elomile nelimanzi lephepha nokwenza ngcono iphepha elomile nelimanzi lephepha nokwandisa ukubhuka kwezintambo ezincane nokugcwaliswa.
1.Kulula ukuncibilika, chaza isikhathi 40min
2. Ukusebenza kahle okuphezulu
3. Isisindo esiphakeme, isisindo samangqamuzana 10million
4. Ukuhlanzeka okuphezulu, ngaphandle kokungcola
Isihlabathi esimhlophe esimhlophe
1. Kufanele ihlanjululwe ekugxileni kwe-0.1% (ngokusekelwe kokuqukethwe okuqinile) .Kungcono ukusebenzisa amanzi angathathi hlangothi noma amanzi.
2. Lapho wenza isixazululo, umkhiqizo kufanele uhlakazeke ngokulinganayo emanzini anyakazayo, imvamisa izinga lokushisa liphakathi kuka-50-60 ℃.
3. Isilinganiso sokonga kakhulu sisekelwe ecaleni.
Isitoreji: Izinga lokushisa lesitoreji se-emulsion liphakathi ngokuphelele kuka-0-35 ℃. I-emulsion ejwayelekile igcinwa izinyanga eziyisithupha. Lapho isikhathi sokugcina siside, kuzoba khona ungqimba lwamafutha obekiwe engxenyeni engenhla ye-emulsion futhi kuyinto ejwayelekile. Ngalesi sikhathi, isigaba samafutha kufanele sibuyiselwe ku-emulsion ngokuxakaniseka kwemishini, ukujikeleza kwepompo, noma ukuphazamiseka kwe-nitrogen. Ukusebenza kwe-emulsion ngeke kuthinteke. I-emulsion iqandeka ezingeni lokushisa eliphansi kunamanzi. I-emulsion efriziwe ingasetshenziswa ngemuva kokuncibilika, futhi ukusebenza kwayo ngeke kushintshe kakhulu. Kodwa-ke, kungadingeka ukwengeza okokusebenza okulwa nesigaba emanzini lapho kuhlanjululwa ngamanzi.Ingagcinwa izinyanga eziyisithupha. Lapho isikhathi sokugcina siside, kuzoba noqweqwe lwamafutha obekwe ngaphezulu
Langaphambilini I-PAM-Anionic Polyacrylamide
Olandelayo: I-PAC-PolyAluminium Chloride